Tampon'ny Firenena folo amin'ny avo Indrindra Nandoa Karama ho Mpisolovava - Mpisolovava avy amin'ny firenena Arabo. Arabo mpisolovava an-tserasera.
Tampon'ny Firenena folo amin'ny avo Indrindra Nandoa Karama ho Mpisolovava
Ny ray aman-dreny amporisiho ny ankizy mba hiasa mafy any an-tsekoly sy hitondra ny asa toy ny fanafody, na ny lalàna, satria izy ireo dia heverina ho kaja sy tsara karamaAraka ny Gazety-boky Forbes, vaovao nahazo diplaoma avy malaza lalàna sekoly dia afaka, ohatra, manao GBP, isan-taona. Ny isa dia mety ho ambony na ambany arakaraka ny firenena ny mpianatra misafidy ny hiaina sy hiasa ao. Ireto ny firenena folo ambony ny karama ambony indrindra ny karama ho an'ny mpisolovava, mifototra amin'ny vaovao nangonina avy amin'ny Robert Walters' Karama Fanadihadiana. Efa vanim-potoana sarotra ho an'ny UK, ny fikorontanana ny Brexit mafana ny rambony ny efa firenena ny krizin'ny toekarena mandravarava. Fa ny zavatra dia mitady ny, sy ny governemanta Britanika nitatitra ny fitomboan'ny. Ny fahadimy lehibe indrindra ny toe-karena eto amin'izao tontolo izao raha ny lehibe vokatra ao an-toerana, ny Britanika toe-karena voalohany indrindra dia mifototra amin'ny fanompoana orinasa ihany koa fa ny faha- lehibe indrindra amin'ireo mpanondrana entana eo amin'izao tontolo izao. UK ihany koa touts ny fanamafisana ny lanitry eoropa orinasa izay mamokatra betsaka ny harin-karena faobe. Toa mpisolo vava dia mahatsiaro ny madinika ara-toekarena upswing toy ny tsy miankina ny fampiharana ny lalàna matihanina efatra taona ny traikefa hanao ny £. mety ho farany slot eo amin'ny lisitra, fa mbola mendrika ny karamany.
Belzika dia efa ela no ampiasaina amin'ny foibe-toerana ao Eoropa ny ara-bola ho soa.
Satria ny maha firenena faharoa rehefa grande-Bretagne mba hiaina ny revolisiona indostria, dia nijanona kely nefa matanjaka ny toe-karena. Izany dia iray amin'ireo mpikambana mpanorina ny Eoropeana ara-Toekarena, ny Fiaraha-monina izay nivoatra ho ny Vondrona Eoropeana, koa mampiakatra ny tombony ara-toekarena toerana. Na dia voakasiky ny vao haingana fitotonganana ara-toekarena, ny toe-karena dia mbola mafy, ary manana ny avo indrindra harin-karena faobe eto amin'izao tontolo izao (lehibe vokatra ao an-toerana) izay avo kely toy izany ny firenena. Na dia efa matihanina rehetra mankafy ny avo ny kalitaon'ny fiainana sy ny eran-tany ny fifaninanana karama, Mpisolovava amin'ny dimy ka hatramin'ny fito taona ny traikefa no karama £. ny fanaovana azy ireo ny fahasivy karama ambony indrindra lalàna matihanina eto amin'izao tontolo izao. Na dia i Singapore dia ny iray amin'ireo kely indrindra amin'ireo firenena ao amin'ny tontolo izao dia manana ny matanjaka indrindra ny toe-karena tao Asia. Ny ankamaroan ny toekaren'ny firenena dia mifototra amin'ny fanompoana orinasa, fa izy ireo ihany koa ny fanondranana sy ny fitaovana elektronika sy ny biomedical ny teknolojia sy ny toe-karena dia mialoha mba maniry amin'ny iray amin'ny telo taona ho avy ity. Angamba ny kely indrindra amin'ny firenena ny lisitry Singapore mihazona ny faha- toerana avo indrindra ho an'ny Mpisolovava ny karama amin'ny £. Ny nosy ny firenena mbola somary unscathed ny olana ara-toekarena fahobe sy ialana tanteraka ny fihemoran'ny fiharian-karena (izay tsy azo hoy ny ankamaroan ny firenena hafa ao amin'ny lisitra izany). Raha ny marina, Aostralia nahavita nanaporofo fa mitete-midina fanavaozana ara-toekarena dia fandaniam-potoana tanteraka, amin'ny alalan'ny fandefasana ny tsirairay sy ny rehetra Aostralia tokantrano iray dolara sivin-jato jereo mandrisika ny fandaniana. Aostralia no iray amin'ny lehibe indrindra tsena eto amin'izao tontolo izao, amin'ny avo ny kalitaon'ny fiainana sy ny fifaninanana maneran-karama. Izany dia hita taratra amin'ny fomba izy ireo ny manolotra ny faha- karama ambony indrindra ny mpisolovava eto amin'izao tontolo izao. Ny eo ho eo ny karama ho an'ny olona tsy miankina amin'ny fomba fanao amin'ny - telo taona ny traikefa no £.
Ny mpahay lalàna ao Frantsa mahazo kokoa ny vola isan-taona noho ny Aostraliana namany toy ny maka an-trano ny £.
Fa, ny vidim-piainana any Frantsa no tena avo, ary ny hetra sy ny anjara biriky amin'ny fiarovana ara-tsosialy misy ny avo indrindra eo amin'izao tontolo izao.
Noho izany, na dia mety mahazo vola be dia be, toy ny mpahay lalàna ao Frantsa, ianao angamba no mamonjy tsy, manao France fahenina ao amin'ny lisitry ny firenena amin'ny avo karama fonosana ho an'ny mpisolovava. I japana dia fantatra noho ny ara-teknolojia ambony, fa ny toe-karena dia tsy mifototra amin'ny fanondranana ny fitaovana elektronika sy ny teknolojia. Amin'izao fotoana izao dia manana ny faha- ny harin-karena faobe avo indrindra eo amin'izao tontolo izao sy ny fahefatra ambony indrindra ny fahefa-mividy.
Ny toe-karena amin'izao fotoana izao dia mifantoka amin'ny fiara, fametrahana mazava tsara sy ny teknolojia avo-entana.
Raha ny tena izy, dia izao tontolo izao lehibe indrindra fahatelo mpanamboatra fiara. Fa tsy ny zava-drehetra dia avo ny tombom-barotra sy ny fiakaran'ny harin-karena faobe ho an'ny Japana ny tena salama ara-toe-karena dia ho tandindonin-doza noho ny fahanterana miasa mponina sy ny tena ambany dia ambany ny fahaterahana-tahan'ny. Izany dia mety hiafara amin'ny taranaka tsirairay amin'ny tombontsoa ara-tsosialy raha tsy ampy ny olona ampiasaina mba hameno ny filaminana ara-tsosialy ny vola. Ny mpahay lalàna ao Japana dia tsy maintsy misy ny olana raha toa ka lasa ambanin-javatra sasany ny £, izay mahatonga azy ireo ny faha- onitra ambony indrindra ny mpanao lalàna. Izany Afrika faharoa firenena manankarena indrindra (rehefa Nizeria) ary manana mitombo hatrany afovoany-kilasy. Ny iray dia efatra monja ny firenena hafa any Afrika hankafy ny ambony-afovoany-bola ny toe-karena, S. Afrika tsy dia matanjaka ny toe-karena, fa izany koa dia tsy mitsaha-mitombo. Tsy mitsaha-mitombo izany toekarena dia hita amin'ny alalan'ny manana ny fahefatra best-karama ny mpisolovava eto amin'izao tontolo izao izay manao ny karama isan-taona ny £, fotsiny - traikefa nandritra ny taona maro. Fantatra ho toy ny"Manitra Bay"na ny"Pearl-Orient"i Hong Kong, izay nametraka ny tenany ho toy ny iray amin'ireo kilonga ara-bola hubs ny Kaontinanta Aziatika. Miaraka amin'ny toe-karena ankapobeny dia mifototra amin'ny sehatra ara-bola sy ny fanompoana orinasa, Hong Kong dia nivoatra ho any amin'ny kolontsaina maro nifangaro, ny avo noho ny karama sy ny kalitaon'ny fiainana. Ny mpahay lalàna ao Hong Kong koa ankafizo io avo kalitaon'ny fiainana ary tena fifaninanana karama, ny fahatelo-tsara indrindra ao amin'ny tontolo izao raha ny marina. Ohatra, ny mpisolovava amin'ny - taona traikefa amin'ny tsy miankina fanao manana ny mety mba ho whopping £. Tsy mahagaga izany fa ny iray amin'ireo izao tontolo izao ny mpitarika ara-bola ny orinasa hery-trano ary indrindra ny toe-karena ho tsara-onitra ny mpiasa. Tsy dia Soisa fantatra amin'ny sehatry ny banky ny olom-pirenena ihany koa ankafizo ny iray amin'ireo toetra ambony indrindra amin'ny fiainana manerana izao tontolo izao. Ny mpahay lalàna eo amin'ny - traikefa nandritra ny taona maro dia afaka manao ny mahagaga £. isan-taona Na dia ny vidim-piainana dia mety ho avo dia avo, izany dia voalanjalanja avy amin'ny famatsiam-bola ny fitsaboana, sy ny fanabeazana. Tamin'ny-tampon'ny ny lisitra dia iray amin'ireo indrindra manerana izao tontolo izao litigious firenena eto amin'izao tontolo izao: Ny Etazonia. Mpisolo vava no tena avo-danja ny olona any Etazonia, izay anjara-raharaha miavaka be ny vola noho ny asa. Iray American mpahay lalàna amin'ny iray monja ho efa-taona ny traikefa afaka hitondra an-trano whopping £. Raha toa ianao avy amin'ny iraisam-pirenena ny asa mihaza ny maha-ara-dalàna ny manam-pahaizana manokana, dia mety ho tianao ny handinika an-tampon'ny firenena folo amin'ny ambony indrindra ny karama ho an'ny mpisolovava alohan'ny mitady any an-kafa. Raha toa ianao ka mpisolovava iray miasa ao amin'ny misy ny firenena amin'ny lisitra ity, aoka isika hahafantatra momba ny traikefa miasa ao amin'ny ara-dalàna an-tsaha ao amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany.
Arabo Fiaraha-monina noho ny Fananana ara-Tsaina
Шаер, лэзём али, яке кык полэс гражданствомы - Алессио право группа